မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): သိစေချင် ဖတ်စေချင်၍သာ တင်ပါသည် (ရိုင်းသည်ဟု မထင်စေချင်ပါ)
ဘူလေးလည်း ဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောကျတယ်...ရေးထားတာ အမှန်တွေချည်းပဲ.
အခုပြောမယ့် ပုံပြင်လေးကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ဖတ်မိသမျှလေး
ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ ဒီစာတွေက ရေးသူနာမည်ပါနေပြီးသားပါ ကိုယ်တိုင်ရေး
မဟုတ်ကြောင်း ၀န်ခံပါသည် ကိုသစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်မှာ တွေ့ လို့ ကူးကြည့်တာ မရ၀ူး
အကြံဖံထုတ်လိုက်မှ ကော်ပီယူခွင့်ရတယ်..ကဲဖတ်စေချင်၍ ကူးခဲသည်.............။
အင်းးးးးးးးးး မပြောချင်တော့ပါဘူး သမက်ကလေးရယ်
ဟုတ်ပါတယ် ယောက်ခမရယ်..သူတို့ ပြောသလို ဘယ်နှစ်ခု၇ှိလဲသာ မရေတွက်တာ တွေ့ တာတော့တွေ့ ခဲ့တယ်..မောင်လေး သွားမလားတဲ့..ဘယ်သွားရမှာတုံး ကျုပ် Happy world သွားမလို့ ဆိုပြီး လစ်ပြေးခဲ့ရတယ်..ရန်ကုန်မှာပေါ့...တကယ်ပါဆို...ဘယ်လိုလုပ်ရမတုံးနော..အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ..
အင်းးးးးးးးးးး ၀ အဲဒါတွေဖတ်ရရင် စိတ်ညစ်လယ်ကွယ်...
နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ လူကြီးတွေအနေနဲ့ ဒီလိုကိစ္စတွေ ရှိနေတာကိုသိရင်လည်း အမြန်ဖြေရှင်းပေးစေချင်တယ်ဗျာ။
စီးပွားရေး သမားတွေအနေနဲ့လည်း အလုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး နှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ မလုပ်သင့်ဘူး။
အမျိုးသမီးငယ်တွေအနေနဲ့လည်း ပြေလည်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး အလွယ်မလိုက်စေချင်ဘူး။
အဲဒီလိုရှိတာ စိတ်မကောင်းပေမယ့်တကယ့် အမျိုးကောင်းသမီးတွေ အတွက်တော့ အန္တရယ် ကင်းပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့
အင်း ဖတ်လိုက်မိတာ ရင်ထဲ တစ်ကယ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
တစ်ခုလောက် ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စ အများစုအတွက် အနေနဲ့မတတ်နိုင်ပေမဲ့ ဒီဖေ့စ်ဘွတ်ကို သုံးနေ၊ ဖတ်မိတဲ့သူများ မိမိနဲ့နီးစပ်တဲ့၊ ဥပမာ မိမိ မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင် မိသားစုများ၊ မိမိရဲ့မိတ်ဆွေများကို အလျဉ်းသင့်သလို မျှဝေပေးရင် ဒီအတိုင်းနေလိုက်တာထက်စာရင် ......။
မိန်းကလေးတွေအတွက် အဲဒီလိုပျက်စီးဖို့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ အဓိကအားဖြင့် မိဘဆွေမျိုးတွေကို ထောက်ပံ့ချင်စိတ်ရယ်၊ လုံလောက်တဲ့ ပညာအခြေခံအားနည်းမှုကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းရယ်၊
နောက်တစ်ခုက ခေတ်နဲ့ အညီပေါ်ထွန်းလာသော ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနောက် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်လဲလှယ်လိုခြင်း ၊ ငွေရလွယ်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်မှ ပြည့်စုံ
ကောင်းမွန်သော လုပ်ခလစာအခွင့်အရေး အမျိုးသမီးထုအတွက် မဖန်တီး
ပေးနိုင်ခြင်းဟု ထင်မြင်မိပါသည် ။
oakkar min said...
စိတ်တင်ပြချင်ပါတယ် ဓာတ်ပုံ၊ဆိုင်၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Record တွေလဲရှိတယ်
တချို့မိန်းကလေး တွေဆို အကြွေးတင်ပြီး နှစ်နဲ့ချီပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်
နောက်ဆုံးမတက်နိုင်တဲ့အဆုံး ထွက်ပြေးကြတယ်။ ထိုင်ထတွေလုပ်ခိုင်းတယ်၊
ဆိုင်ရှင်၊ မန်နေဂျာ တွေပါးနားရိုက်တာခံကြရတယ်၊ ပိုက်ဆံတွေဖြတ်တယ်
ငွေဝယ်ကျွန်လိုသဘော မျိုးတွေလုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်ထဲ ကဆိုင်တွေအကြောင်းတင်ပြချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတင်ပြရပါမလဲ
ရန်ကုန်မှာ အဲလို မျိုးတွေ ပေါနေတာ ခုမှပဲ သိတယ်
Aye Minn said...
့်အလို အဖြစ် မျိုး ရှိလား :p
အောင်မင်္ဂလာကားဝင်းထဲမှာ မြို့ နယ်ကလူကြီးတွေပဲသွားတြ့နေရာရှိတယ်.သာမန်လူမသိနိုင်ဘူး ကျန်တဲ့ဆုင်တွေအကုန်ပိတ်ရတယ်.သူမပိတ်ရဘူး.မင်္ဂလာဒုံကမြို့ နယ်လူကြီးတွေ၊မြောက်ဥက္ကလာ၊ရွှေပေါက်ကံကပါလာတယ်လို့ သတင်းရရှိကြောင်း တာဝန်သိပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သတင်းပေးလိုက်ပါာ်.သွားနိုင်ပါတယ်ဘူကြီးမင်းတို့ 
tunlin lay said...
ဒါနဲ့တောင် လွှတ်တော်မှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း တရားဝင်လုပ်ခိုင်းဖို့ တင်တဲ့သူက ရှိသေးတယ်။ .....ရှက်မရှိတဲ့ ဖာခေါင်း။ ကန်တော့ ကန်တော့ သူ့အမေ၊ သူ့သမီးတွေ သွားလုပ်ခိုင်းပါလား၊ ဖာပဲဖြစ်မယ့်လူမျိူး လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆက်လက်ခံထားတာ အဲ့လွှတ်တော်ကိုတောင် တော်တော်ရွံ လာပြီ။ နိုင်ငံတော်က လူ....တွေကလည်းမဖြေရှင်းပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်သွားနေ ကြတာကို။ အဲ့အနှိပ်ခန်းသွားတဲ့ ဖာခေါင်းတွေကလေ သူတို့အမေတွေကလည်း အဲ့လိုမိန်းမမို့လို့ပေါ့။ ၀ဋ်လည်ပါစေ။ နောက်ဘ၀မကူးစေရဘူး။ လွှတ်တော်မှာ တင်တဲ့ဖာခေါင်း ကိုလည်း ကြည့်ဆုံးမကြပါဦး။
august min said...
သတ္တ၀ါ တစ်ခုကံတစ်ခု ပါပဲ....
I'm not agree with that.If u parent knew about it
they will regret because they give birth u.
U can do honest thing how to provide them.First u r too greedy so u choose this wrong way. Only people who lazy to do that.
zinzin naing said...
ကောင်းတဲမိန်းကလေးတွေလည်း ညဘက်အပြင်သွားရတာ မလွယ်ဘူး။
Lasham Khawn Ja said...
စားဝတ်နေရေးကြောင့်ဆိုတာ 50 ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံတယ် ကျန်တဲ့ 50 ရာခိုင်နှုန်းက သူများဝတ်သလိုဝတ်ချင်တယ် ရှိတာနဲ့ မရောင့်ရဲနိုင်လို့ သူများစားတာစားချင်တယ် ၀ယ်စားနိုင်တဲ့နေ့ အ၀စားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မမွေးနိုင်လို့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ မိဘမဲ့ကျောင်းဆိုတာကို ကိုယ်က အရည်ကျိုသောက်ထားလို့ပါ :D
hein lay said...
ဘ၀ဆိုတာ တိုက်ပွဲ ခယ်မဆိုတာ လိုက်ပွဲပေါ့ နော်
ThantZin Kyaw said...